ဒါလဲ တဈခုကောငျးပါတယျ အပေါငျးအသငျးနညျးလဲ စိတျခမျြးသာရတယျလေ တခြို့ကတော့ မာနကွီးတယျလို့ စှပျစှဲ ​ကွသေးတာ မရယျမပွုံးနဲ့တဲ့ အရငျကဆို ကြှနျမမှာ လူတိုငျးအပျေါ ဖျောဖျောရှရှေနေဲ့ စြေးတအားပေါခဲ့ဖူးတာ ကိုယျနဲ့သိတာပဲ ဖွဈဖွဈ မသိတာပဲဖွဈဖွဈ ကူညီစရာရှိတဲ့အခါ ကူညီပေးလိုကျရမှ ပွုံးပွတတျတာကလဲ မသိရငျ ဖားနသေလိုမြိုးပေါ့
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကြှနျမ စြေးအရမျးပေါခဲ့ဖူးတာလေ ကြှနျမစတေနာတှေ သံယောဇဥျတှကေို တနျဖိုးထားရကောငျးမှနျး နားမလညျကွတော့ဘူး အဲ့ဒီနောကျပိုငျး ကြှနျမ တညျတညျတံ့တံ့လေး နထေိုငျတတျလာရုံပါ မာနကွီးလာတာ မဟုတျဘူး ကိုယျ့အပေါငျးအသငျးတှကေတော့ ကိုယျပေါမှနျးသိပါတယျ ကိုယျနဲ့ မရငျးနှီးတဲ့လူတှကေတော့ မာနကွီးတယျပေါ့
ဘယျလိုပဲ ထငျထငျပါ အခုလိုနရေတာ ကြှနျမ တကယျအဆငျပွပေါတယျ ။ကိုယျ့ဘကျက အတတျနိုငျဆုံး အစဈအမှနျတှပေဲ ပေးတယျ တနျဖိုးထားတယျ ။ လေးစားသငျ့တဲ့အခါ လေးစားတယျ မလိုအပျဘူးလို့ ထငျတဲ့အခါ ဘ၀ထဲက ထုတျပဈလိုကျတယျ ကိုယျ့ဘကျက စဈမှနျခဲ့သလောကျ အပျေါယံတှပေဲ ရလာတဲ့အခါ တဈခါတဈခါ ၀မျးနညျးရုံပဲရှိတာပါ
သိပျပွီးတော့ မခံစားဖွဈတော့ဘူး . . . ကိုယျ့စတေနာမှနျရငျ အခြိနျတနျရငျ တနျပွနျလာပါလိမျ့မယျ ခုတော့ အခြိနျမတနျသေးဘူးလို့ပဲ သဘောထားပါတယျ အခြိနျတနျတဲ့ တဈနတေ့ော့ ကိုယျလဲ အစဈအမှနျတှပေဲ ပွနျရလာမှာပါ ။
ဒါလဲ တစ်ခုကောင်းပါတယ် အပေါင်းအသင်းနည်းလဲ စိတ်ချမ်းသာရတယ်လေ တချို့ကတော့ မာနကြီးတယ်လို့ စွပ်စွဲ ​ကြသေးတာ မရယ်မပြုံးနဲ့တဲ့ အရင်ကဆို ကျွန်မမှာ လူတိုင်းအပေါ် ဖော်ဖော်ရွေရွေနဲ့ ဈေးတအားပေါခဲ့ဖူးတာ ကိုယ်နဲ့သိတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မသိတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကူညီစရာရှိတဲ့အခါ ကူညီပေးလိုက်ရမှ ပြုံးပြတတ်တာကလဲ မသိရင် ဖားနေသလိုမျိုးပေါ့
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ ဈေးအရမ်းပေါခဲ့ဖူးတာလေ ကျွန်မစေတနာတွေ သံယောဇဉ်တွေကို တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း နားမလည်ကြတော့ဘူး အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ကျွန်မ တည်တည်တံ့တံ့လေး နေထိုင်တတ်လာရုံပါ မာနကြီးလာတာ မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းတွေကတော့ ကိုယ်ပေါမှန်းသိပါတယ် ကိုယ်နဲ့ မရင်းနှီးတဲ့လူတွေကတော့ မာနကြီးတယ်ပေါ့
ဘယ်လိုပဲ ထင်ထင်ပါ အခုလိုနေရတာ ကျွန်မ တကယ်အဆင်ပြေပါတယ် ။ကိုယ့်ဘက်က အတတ်နိုင်ဆုံး အစစ်အမှန်တွေပဲ ပေးတယ် တန်ဖိုးထားတယ် ။ လေးစားသင့်တဲ့အခါ လေးစားတယ် မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်တဲ့အခါ ဘ၀ထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်တယ် ကိုယ့်ဘက်က စစ်မှန်ခဲ့သလောက် အပေါ်ယံတွေပဲ ရလာတဲ့အခါ တစ်ခါတစ်ခါ ၀မ်းနည်းရုံပဲရှိတာပါ
သိပ်ပြီးတော့ မခံစားဖြစ်တော့ဘူး . . . ကိုယ့်စေတနာမှန်ရင် အချိန်တန်ရင် တန်ပြန်လာပါလိမ့်မယ် ခုတော့ အချိန်မတန်သေးဘူးလို့ပဲ သဘောထားပါတယ် အချိန်တန်တဲ့ တစ်နေ့တော့ ကိုယ်လဲ အစစ်အမှန်တွေပဲ ပြန်ရလာမှာပါ ။
လူတှကေ ပိုငျဆိုငျပွီးသှားတဲ့အခါ အရငျလို ဂရုစိုကျစရာမလိုတော့ဘူးလို့ထငျသှားတတျကွတာပဲ